> Resource > Ladnaansho > Siduu u formatted Memory Card Recovery
Sidee inuu ka soo kabsado Pictures ka formatted Memory Card?
Waxaan ku soo watay boqolaal sawirada la camera Canon Powershot intii aan safarka Spain. Dhamaan sawirada ayaa ku kaydsan kaarka xasuusta 16GB. Laakiin xalay, si qalad ah waan formatted kaadhka xusuusta marka aan ku saabsan si aad u hubiso inta ay le'eg tahay meel aan isticmaalo. Walwalsan laga badiyay markii ugu fiican ee Spain, hadda waan ahay. Ma jiraan qaar ka mid ah siyaabaha aad ku soo kabsado sawiro ka kaadhka xusuusta formatted? Xal kasta oo la mid aad wax ku oolka lahaa.
Raadinta siyaabo inuu ka soo kabsado sawirada kaadhka xusuusta formatted? Tani ma aha arin wayn ilaa iyo inta aad u dhaqmo si degdeg ah oo ay leeyihiin cajiib ah formatted kabashada software kaadhka xusuusta ee gacanta.
In sidaa la yeelo, oo aad u baahan tahay marka hore hubi in aad aan u saaray files cusub oo ku saabsan kaadhka xusuusta aad ka dib markii aad u formatted. Ka dibna waxaad qaadan kartaa Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac sida isku day ah. Tani barnaamij si fiican loogu tala galay labada Windows iyo Mac users u saamaxaaya in ay soo kabsadaan sawirada kaadhka xusuusta formatted aan ka kaaftoomi. Qalabkani waxa uu yahay la jaan qaada dhamaan kaadhka xusuusta ay ka mid yihiin kaarka SD, kaarka CF, kaarka microSD, kaarka XD, iwm
Waxaad ka heli kartaa version tijaabo ah Wondershare Data Recovery hoos ku qoran si loo farsameeyo formatted xogta soo kabashada kaadhka xusuusta ku qasabno yar.
Ceshano Pictures ka formatted Memory Card ee 3 Talaabooyinka
Waxaan sameyn doonaa ka soo kabsado la Wondershare Data Recovery u version Windows. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, waxaad samayn kartaa xasuusta dib u soo kabashada card formatted in talaabooyin la mid ah la version Mac.
Tallaabada 1 Dooro "Wizard Recovery" mode
Marka bilaabay Wondershare Data Recovery, aad doonaa si otomaatik ah Hanuuniyey "Wizard Mode", sida image hoose. In hab this, kaliya aad u baahan tahay in aad ka jawaabto su'aalo yar oo sahlan.
Guji "Next" button furmo in la dhaqaajiyo mid.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad dooran kartaa "Mode Standard" aad.
Tallaabada 2 Dooro nooca file aad rabto in aad ka soo kabsado aad kaadhka xusuusta formatted
Halkan waxa aad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan "Photo / Graphic" doorasho oo guji "Next" in ay sii wadaan.
Tallaabada 3 Dooro kaadhka xusuusta formatted in iskaan sawirada lumay
Hadda waxaad u baahan tahay in ay doortaan warqad drive aad kaadhka xusuusta formatted oo guji "Next" inuu u dhaqaaqo tallaabo iskaanka.
Fiiro Gaar ah: Waxa muhiim ah in aad kaadhka xusuusta formatted waxaa laga garan karaa sida disk adag on your computer.
Tallaabada 4 baarista kaadhka xusuusta formatted
Wondershare Data Recovery Haatan diyaar u ah inuu raadiyo sawirada lumay ee aad kaadhka xusuusta formatted noqon doonaa.
Fiiro gaar ah: Fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho oo guji "Start" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka.
Talaabada 5 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan sawirada kaadhka xusuusta formatted
Sawirrada laga helay aad kaadhka xusuusta formatted lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala barnaamijka iyo waxaad awoodi doontaa in ku eegaan oo dhan oo iyaga ka hor soo kabashada.
Ugu danbeyn, waxaad dooran kartaa sawirro aad u baahan tahay oo ka dhacay on "Ladnaansho" badhanka si ay u soo celiyaan on your computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha sii sawirada kabsaday aad kaadhka xusuusta formatted inta lagu guda jiro dib u soo kabashada.
Siduu u MacBook Pro Hard Drive Recovery
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka Computer
Habka ugu fudud ee ay u gudbiyaan Windows Phone in macruufka 9
Reviews oo ka mid ah 10-macruufka Data Recovery Software
Sida loo resize xijaab in Windows 10/8/7?
3 Siyaabo inuu ka soo kabsado tirtiray fayl
Sida loo qari Recycle Bin Icon ka Your Desktop
Siduu u ACP-EP Memory Data Recovery